Xero Cusub oo loogu talagalay shaqaalaha Apple, Central & Wolfe | Waxaan ka socdaa mac
Apple waa sanduuq layaab leh inkasta oo aan macluumaad badan ka hayno waxa uu yahay Apple's Campus 2, oo loogu magac daray Apple Park, Ma aha dhismaha kaliya ee ay calaamadda dhismuhu ka shaqeyso xilligan. Ago ku dhowaad sanad lamaanaheena Jordi Wuu nagala hadlay arintaas, laakiin ilaa iyo hada mawduuca lama taabanin.
Waxaan kuu sheegeynaa tan sababtoo ah waxay soo ifbaxday, markale, in Apple ay dhameystireyso dhismaha xarunteeda seddexaad, kiiskan xafiisyada, oo ay u bixiyeen magaca Central & Wolfe. Yihiin xafiisyada ay Apple furayso sanadka 2018 ku yaal Dooxada Silicon.
Dhismahan cusub, oo leh qaab eg oo la mid ah Apple Park laakiin xaaladdan oo cabbirkeedu yaryahay una eg saddex caleen, waxaa la heli doonaa shaqaale shirkadeed oo badan oo hal sabab ama mid kale ku jiri karin Apple Park. Sidii Apple Park ku jirtay, Apple waxay isku dayday inay sameyso dhismahan waxay ku tiirsan yihiin ku dhowaad 100% tamarta dib loo cusboonaysiin karo waxayna umuuqataa inay guuleysteen.
Munaasabaddan, naqshadeynta waxaa loo aaneeyay naqshadayaasha ka hoos shaqeeya Saxiixa HOK, inta mashruucu fuliyay Heerka 10. Shaqooyinka waxaa loo maleynayaa in la dhammeeyo bishan, laakiin sida aad ku aragto fiidiyowga aan kula soconno, arrintu waxay umuuqataa inay qaadaneyso wax yar.
Shaki la'aan, waa dhisme cusub oo ay soo dhaweyn doonaan dhammaan kuwa sameeya shaxda ururada ee Apple ee ku dambayn doona ka shaqaynta. Waanu ka feejignaan doonnaa wixii war ah ee ku saabsan, maxaa yeelay, illaa inta ay ka khusayso Apple, ma hayno wax war ah. Ma aysan siinin wax xayeysiis ah xarumahan cusub. Xaruntan cusub waxay dhowr mayl u jirtaa Apple Park oo ku taal Sunnyvale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xero Cusub oo loogu talagalay shaqaalaha Apple, Central & Wolfe
TouchBrickout, nuqul ka mid ah quraafaadka Arkanoid ayaa hadda loo heli karaa Mac waana bilaash